Apple dia namoaka ny fivarotana an-tserasera any Torkia: miantsena sy miantsena! | Vaovao IPhone
Ho fanampin'ny fivarotana ara-batana dia firenena maro hafa no manana ny Apple Store Online, izany hoe fivarotana ofisialy ny paoma lehibe amin'ny Internet izay ahafahantsika mividy an-tserasera sy mandoa amin'ny alàlan'ny carte de crédit na carte de crédit ka tonga any an-tranonay ilay baiko efa nataonay. Ireo fividianana ireo dia atao mivantana amin'ny Internet ary voaomana ao amin'ny trano fanatobiana entana ao Apple ka tsy mila miahiahy momba ny kalitaon'ny fitaovana azontsika izahay. Araka ny hitantsika amin'ny sary izay mitarika ity lahatsoratra ity, nanapa-kevitra ny hanokatra ny magazay an-tserasera (Apple Store Online) any Torkia ny paoma lehibe iray mba hahafahan'ny mponina ao amin'ny firenena mankafy ny vokany amin'ny teny filamatra: "Tongasoa foana izy ireo."
Store Online any Torkia: ny paoma lehibe dia mampitombo ny firenena amidy
Nanokatra ny fivarotana an-tserasera any Torkia i Apple mba hahafahan'ny Tiorka rehetra mividy ny vokatra amidy amin'ny fivarotana an-tserasera: iPods, iPads, iPhones, iPods Touch, Macs, Apple TVs ... Toy ny any amin'ny magazay hafa, ny Online Store avy amin'ny Tsy vitan'ny hoe afaka mividy fitaovana i Torkia fa hanana kojakoja samihafa ihany koa izay amidin'i Apple ao amin'ny fivarotany, toa ny Smart Covers na Smart Cases, ireo fonony miaro ny iPads amin'ny rangotra sy ny bondrona.
Hatreto dia miresaka momba ny Apple Online Store vaovao any Torkia isika fa, Ary ny Apple Store ara-batana eto amin'ity firenena ity?
Araka ny notaterin'ny The Wall Street Journal andro hafa, hanokatra ny magazay voalohany any Torkia i Apple mandritra ny taona 2014. Ity fivarotana ity dia hita ao amin'ny Zorlu Instanbul Center eo anelanelan'ny fivarotana Burberry sy Louis Vutton.
Efa miteny ny Internet fa ny drafitra ananan'i Apple dia an'ny sokafy ny fivarotana an-tserasera amin'ny firenena iray hamita amin'ny fanokafana iray Fivarotana Apple Physical ao amin'io firenena io ihany. Mihevitra aho fa tsy dia manaiky loatra an'ity fanambarana farany ity, saingy io no voalaza ao amin'ny tambajotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia namoaka ny fivarotana an-tserasera any Torkia: miantsena sy miantsena!
"Misokatra Apple" Raha moana ny foy ... nahoana no apetrakao, sa tsy izany?
«Any Torkia hahafahan'ny Tiorka rehetra» Tompondaka tena tsara, raha Aragonese ireo avy any Aragon, dia Turquois ireo avy any Torkia… Eny na eny!